MM Dr Abiy Ahimad godaantota 100 oli waliin biyyatti deebii'an - BBC News Afaan Oromoo
Ministirri Mummee Dr Abiy Ahimad dowwannaasaanii Sudaan xumurruun dubartoota 100 ta'an, kan karaa seeraan alaa godaansifaman waliin biyyaatti deebii'an.
MM Abiy erga sirna waliigaltee seena qabeessa ta'e harra Mana Mare Humana Waraana Ce'umsaafi Humnoota Bilisummaafi Jijjirammaa Sudaan jidduutti mallattaa'erratti argamaniin booda lammiilee Itoophiyaa biyyoota biraatti dabarfamuuf turan 100 olii waliin kan gara biyyaatti deebii'an.
Namoota MM waliin gara biyyaatti deebii'an keessattis kanneen balleessaa adda addaatiif mana hidhaa turanii gadhiifaman ni argamu.
MM Dr Abiy sirna mallattoo waliigaltee qaamoolee Sudaan lamaan jidduutti taasifamee booda haasaa taa'sisanii, ummatichi nageenyaafi ulfinasaa tikfachuun ijaarsa dimokraasitiif akka hojjatan waamicha taasisaniiru.
Manni Marii Waraana Sudaaniifi Oggnatoonni sivilii aangoo qoodachuurratti erga alkan guutuu marii taasisanii booda waliigaltee mallatteessan.
Oganaa Waraanaa Olaanoo kan ta'an, Mohaammad Hamdaan, Hemeti Dagoloo, waliigaltee taasifame akka kabajan himan.
Mohaammad Hamdaan 'Hemeti' Dagoloo Sudaatti nama jabaa ta'uun isaa himamuuf BBC tti akka himanitti gartuun lachuu waliigaltee bu'uuraa Sambata duraa waaree booda mallatteessuuf jiru.
Kayyoon waligatee kanaas jeeqmsa ji'ootaaf biyyattii tasgabbii dhabisiisaa ture goolabuun bulchiinsa sivilii hundeessuudha.
Hiriirtonni dimokiraasii leellisaniifi humnaanni to'achuuf yaaluun akka al-Bashiir aangoorraa kaaafamaniin biyyattii keessatti jeequmsi hammaatee ture.
Waliigaltee haaraa kanaan Kaawunsilii walabaa hawaasa keessaa filataman namoota shaniifi jeneraalonni humna waraanaa shan biyyattin amma filannootti bulchuuf jiru.
Waliigaltee haaraa kanaan Kaawusilii walabaa hawaasa keessaa filataman namoota shaniifi jeneraalonni humna waraanaa shan biyyattin amma filannootti bulchuuf jiru.
Gartuun lamaanuu waggaa sadii oliif dabareen wal harkaa fudhuuf waliigalan. Muummichi Ministiraa namoota nagaa(civilians) ta'aanin torban muudama.
Sudaan 'yaalii fonqolchaa ofirraa qolatte'
Dhimmuma walfakkatuuf, Ministirri Mummee Dr. Abiy Ahimad Sanbata kana qondaaltoota isaanii olaanoo waliin ta'uun, magaalaa gudittii biyyattii Kaartum galunsaanii odeeffannoon Imbaasii Itoophiyaa Kaartummitti argamu ni mullisa.
Image copyright MPM office
Mohaammad Hamdaan 'Hemeti' Dagolo Itti-aanaa itti-gaafatamaa Mana Maree Waraana Sudaan Kun biyyattiif 'yeroo seena qababeessa'' jedhaniiru, akka AFP'n caqaseetti.
Sudaan baatii Ebla keessa pirezidaantii biyyattii kan turan Omaar al-Baashir erga moromiin aanngoorraa buufamanii as biyyattiin tasgabbii argattee hin beektu.
Waligaltichis dhimmoota hedduu barbaachisoo kan of keessaa hin qabne ta'ee Jimaata dhufu irratti mariyatamuuf jira.
Turtiin yeroo ce'umsaa labsii seeraa keessa galuuf jiru fuula duratti kan irratti waliigalamudha.
Kunis akka manni maree biyyattii qaama mootummaa isa olaanaa ta'uu ykn qaama mootummaa kan maqaadhaaf ta'udha kanneen jedhan dabalata.
Qaamooleen lamaan oggansa mana marichaa waggoota sadiif marsaadhaan akka ta'u irratti waliigalaniiru.
Manni marichaas miseensoota sivilii shaniifi aanga'oota waraanaa shan kan hammatu yoo ta'u, miseensoonni siviil 11 filataman hammata jedhameera.
Waggaa jalaqabaattis Janaraala waraanaatu mana marichaa oggana yoo ta'u, itti aansee ammoo oggansi sivil baatiiwwan 18 erga ogganeen booda filannootti ce'ama.
Akkasumas, kaabinee ministirri mummee, mormiitootaan filamuufi ministirri waraanaafi ministirri dhimma biyyaa kan waraanaan keessaa filatamu irrattis waliigalaniiru.
Waraannis erga ajjeechaan mormitoota iirratti raawwatamee booda akka dhiifamni taasifamuuf dhiibbaa taasisaa kan turan yoo ta'u, garuu dhimmi kun mallattoo keessa hinjiru.
Jeequmsicharratti qorannoon gadi-fageenyaa gaggeefamuu akka qabaatu waadaan galameera.
Waliigalteen kun hangam barbaachisaadha?
Marii baatiiwan fudhateen booda qaamooleen lamaan waliigaltee waliin mallatteessuurra gahaniiru. Kunis amma mullateera.
Waliigalticha irra gahame jechuunis, oggansa waraanaa waggoota 30 darbaniif aangoorra ture amma Sudaan gara oggansa gutummaatti sivili ta'eetti ce'uuf- akka yaadameetti.
Manni Maree Waraanaa Sudaan 'yaalii fonqolchaa ofirraa qolate'